သက်တန့်ချို: “ တာလီဘန်တွေရဲ့ကြေငြာချက်အပေါ် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ ရွှေမြန်မာ ”
Anonymous July 27, 2012 at 4:13 PM
Don't be so worry. Not so easy. They just threatened only. They r hiding here & there struggling for life.
မြတ်နိူးသူ(MUFL) July 27, 2012 at 7:31 PM
အန်တီလေးမေခင် July 27, 2012 at 7:32 PM
ချစ်ကိုကို July 27, 2012 at 8:55 PM
ကျုပ်တို့စောစီးစွာသတိထားရမှာက မကြာမီရောက်ရှိလာမည့် ဝါဆိုလပြည့်ည ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးနှင့်ဘုရားဖူးပရိတ်သတ် အတွက် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်စွာချထားရပါမည်။မြန်မာပြည်၏ တောင်ပိုင်း၊အနောက်ပိုင်းတို့တွင်ရေတပ်အင်အားတိုးမြှင့်ထားရမည်။လူဉီးရေထူထပ်သောမြို့ကြီးများကိုစစ်သွေးကြွများစိမ့်မဝင်နိုင်အောင်ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
sayaheintintzaw sayaheintintzaw July 27, 2012 at 10:18 PM
ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံး သွေးခုန်းနှုံးတွေ တဒိတ်ဒိတ်တိုအောင် ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါဟာ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကြောင့်လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ပြီး ရေးစေချင်ပါတယ်ဒ
...အလင်းစက်များ July 27, 2012 at 11:51 PM
ရောက်တယ် Doc ရေ။ ခုတလော အဲ့သည်ဝေဒနာတွေနဲ့ရင်ဘတ်ကြီး တင်းကြပ်လှတယ်။ ဘာပဲပြောပြော သတိထားကြပါစို့ လား။
most important thing is DASSK security... No weapons... No security equipment...No Bullet proof jacket... if they want to do most easiest is A May Su... Pls stop give any flower or present to A May Su for her sercuity and protect of the most precious person of our country....
သိ င်္ဂါရ July 28, 2012 at 10:25 AM
အစွန်းရောက်တဲ့ အတွေးတွေက မကောင်းဘူး ထင်မိပါတယ် ကိုသက်တန့်ရေ ... ။ ဘယ်ဘာသာတရားကမှတော့ ... မကောင်းတာ ၊ မသင့်မအပ်ရာတွေ ကို မညွှန်ပြတတ်ကြပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒွမြတ်စွာဘုရားကလည်း မဇ္ဈိမ အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ကိုပဲ ကျင့်သုံးဖို့ ဟောကြားတော်မူခဲ့တာပါပဲ ... ။ လူတွေ ဒေါသ ၊ မောဟ ၊ လောဘတွေနဲ့ ကမ္ဘာကတော့ အမျိုးမျိုးသော စစ်ပွဲတွေ နဲ့ ရန်ငြိုးတွေ နဲ့ ဆက်ပြီး ဆုတ်ကပ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ပြီးရင်း ဖြစ်နေတော့မလားပဲ ...
အရမ်းကောင်းပါတယ် ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ အားပေးလျှက်ပါ
ကျီးကန်း July 29, 2012 at 6:55 PM
ကိုတူး August 1, 2012 at 10:16 PM
တာလီဘန် မကလို့ ဂြိုလ်သားတွေပဲဆင်းလာလာ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် အသက်ပေးကာကွယ်သွားဖို့ အသင့်ပါပဲ။
ကျော်ခိုင် October 17, 2012 at 3:01 PM
ကမ္ဘာ့ဘာသာအားလုံးဟာ လူသားတွေ အေးချမ်းသာယာမှု အတွက်ဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာကတော့ လူသားတွေကို ဗုံခွဲတိုက်ခိုက်ဖိုးဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုသည်က ဘာသာ သည် လူသားတွေအတွက် လူအတွက် မဟုတ်တော့ဘဲ လူသည် ဘာသာအတွက်ဖြစ်နေခြင်းကို ကုလားစုတ်များက မသိခြင်းဘဲ။ ထို.ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြင်နာခြင်းမရှိသော ဘာသာကို ကိုးကွယ်နေသူများကို ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်ပါမကျန်အောင် ရှင်း သင့်တယ်
အမည်မသိ January 29, 2013 at 8:46 AM
ကိုကျော်ခိုင်ပြောသလိုကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်ပါမကျန် ရှင်းသင့်တယ် ဒါပေမဲ့ အခုလောလောဆယ် ဥာဏ်ကိုလွှာပြီးသုံဒရမယ်
မြန်မာနိုင်ငံထဲကမွတ်စလင်တွေကအနေသာကြီးတွေ.... ကျွန်တော်ဆိုသူငယ်ချင်းမွတ်စလင်တစ်ယောက်ကိုမေးဘူးတယ်.....ရိုဟင်ဂျာကိုဘယ်လိုမြင်လည်းဆိုတော့... ရိုဟင်ဂျာဆိုတာရုပ်ကအစစိတ်ဓာတ်ရေးရာပါယုတ်ညံ့ တဲ့ကောင်တွေတဲ့....မူစလင်အချင်းချင်းတောင် ကြဉ်ထားကြတာဗျာကျွန်တော်တု့ ကဘာအရေးလဲ...လာခဲ့လေRSo တွေမင်းတို့ ရဲ့ အရှင်အလာလို ...မင်းတို့ လည်းအလာပဲရမယ် အပြန်မရှိစေရဘူး........အေးအေးဆေးဆေးနေချင်ပါတယ်ဆိုမှဇောင်းလာထပြနေတယ်....
King Asoka March 25, 2013 at 11:43 PM
ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကိုယ်ခံအားကောင်းပြီး ကာကွယ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ အင်အားထက် ဥာဏ်ပညာက ပိုအရေးပါ ပါတယ်။ လူတိုင်း ကိုယ်စီ ကိုယ့်စည်းကို လုံအောင် ကာကွယ်နိုင်ရမယ်။ သူရဲကောင်းစိတ်ဓါတ်နဲ့ ကာကွယ်ရမယ်။
ရန်သူရဲ့အားနည်းချက်က ဘာလဲ။ မိုက်ရူးရဲ့ဆန်တယ်။ ဒေါသထွက်လွယ်တယ်။ အင်းအားများနိုင်ပေမယ့် တစ်ဦးချင်းစီ သတ္တိအားနည်းတယ်။ ဗျုဟာနဲ့ ဥာဏ်ကို လွှာသုံးရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ် အမိမြန်မာနိုင်ငံအတွက်။ အင်အားစုတွေ အသီးသီးလည်း ရှိနေကြမှာပါ။ အားလုံးစည်းလုံးကြပါစို့။